Yan Aung: File Hosting လုပ်နည်းများ...
Thanks for sharing the hosting information with others. It will be good for others to load their own script files so that your own host server is not overwhelmed by all your friends' blogs using your "Peek-a-boo" script.
The same thing happened to Ramani (Hackosphere)
အဲဒီ file hosting တွေမှာ တင်ထားတဲ့ ဖိုင်တွေက အချိန် ဘယ်လောက်ကြာတဲ့အထိ သိမ်းထားပေးတာလဲဗျ
ကိုအောင်နိုင်ထွန်းရေ... Free Hosting Site တွေမှာ တင်ထားတဲ့ပုံတွေက ကိုယ် login ၀င်ပေးနေသလောက်ထိ ခံပါတယ်. ဆိုလိုတာက မသုံးတာကြာရင် Warning Email ပို့ပါတယ်. Your account is expiring soon because it is not active for 45 days ဘာညာပေါ့ဗျာ. အဲဒီ့အခါမှာ ပြန်ပြီး Login လေးလုပ်ပေးလိုက်ရင် ထပ်ပြီး အသက်ဆက်သွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျား. အဆင်ပြေပါစေ.